Egwuregwu ndị a na-agbakarị na mpaghara Caribbean: Site na salsa ruo bachata | Akụkọ Njem
Luis Martinez | 05/05/2021 12:08 | America, omenala
Egwuregwu ndị a na-agbakarị na mpaghara Caribbean nwere mgbọrọgwụ n'oge gara aga. Anyị na-akpọ nke a obosara ókè-ala nke na-agụnye ọtụtụ mba saa mbara site nnọọ Oké Osimiri Caribbean na agwaetiti ndị gbara akụkụ a nke Oké Osimiri Atlantic gburugburu. Otu n'ime ndị mbụ bụ Mexico, Colombia, Nicaragua o Panama, ma banyere nke ikpeazụ, anyị nwere ike ịkpọ mba dị ka Cuba (ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu gbasara omenaala obodo a, pịa ebe a), Dominican Republic o Jamaica.
Ya mere, egwu egwu ndị a na-ahụkarị n'ógbè Caribbean bụ ndị a na-eme n'ókèala ahụ buru ibu. Ugbu a, ha bụ nsonaazụ nke njikọ nke mmetụta atọ: nwa afọ, Spanish na Africa, nke ikpeazụ kpọtara ndị ohu dị ka ebe ha na-aga. N'ezie, ọtụtụ n'ime egwu ndị a gbara na njedebe nke ụbọchị ọrụ ike nke ndị ohu na ndị ọrụ nweere onwe ha. Mana, n’ebughikwu okwu, anyị ga-agwa gị gbasara otu a.
1 Egwuregwu ndị a na-ahụkarị na mpaghara Caribbean: nnukwu ọdịiche
1.1 Salsa, Caribbean ịgba egwu par kacha mma
1.2 Merengue, onyinye Dominican
1.3 Mambo na mbido Africa
1.5 Cumbia, ihe nketa Africa
1.6 Na bachata
1.7 Egwuregwu ndị ọzọ dị na mpaghara Caribbean na-ewu ewu
Egwuregwu ndị a na-ahụkarị na mpaghara Caribbean: nnukwu ọdịiche
Ihe mbu nke puru iche n’egwuregwu ndia bu ọnụ ọgụgụ dị ukwuu n'ime ha dị adị. Dịka ọmụmaatụ, nke a na-akpọ ha nọ na oji, nke si n’agwaetiti Santa Lucia; ihe Puja Ndi Colombia, ndi sextet ma ọ bụ ha bụ palenquero ma ọ bụ obere ịgbà, amụrụ na Panama. Mana, n'ihi enweghị ike ịkwụsị ịgba egwu ndị a niile, anyị ga-agwa gị gbasara ndị kachasị ewu ewu.
Salsa, Caribbean ịgba egwu par kacha mma
Salsa, otu egwuregwu nke ógbè Caribbean dị mma
Na-akpali mmasị, ndị kasị ahụkarị Caribbean agba egwú ghọrọ ewu ewu na New York site na sixties nke narị afọ gara aga. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị egwu Puerto Rican bụ ndị Dominican duziri Johnny pacheco ama anam enye ọwọrọ etop.
Otú ọ dị, mmalite ya laghachiri na mba Caribbean na kpọmkwem kpọmkwem Cuba. N’ezie, ụda olu ya na ụda olu ya na-adabere na egwu ọdịnala sitere mba ahụ. Kpọmkwem, usoro ọdịdị ya sitere na ha bụ ndị Cuba a napụrụkwa abụ ọma ahụ ha bụ montuno.
Ọtụtụ n'ime ngwa ọrụ ya bụkwa ndị Cuba. Ọmụmaatụ, bongo, pailas, the güiro ma ọ bụ ehi ndị ọzọ dịka piano, opi na bass na-agbakwunye. N’ikpeazụ, nkwekọ ya sitere na egwu ndị Europe.
Merengue, onyinye Dominican
Merengue bu egwu kacha ewu ewu na Dominican Republic. Ọ bịakwara United States narị afọ gara aga, mana mmalite ya malitere na iri na itoolu ma edoghị ya anya. Nke ukwuu nke mere na e nwere ọtụtụ akụkọ ifo banyere ya.
Otu n'ime ndị kacha mara amara na-ekwu na otu nnukwu nwa amaala merụrụ ahụ n'ụkwụ na-alụ ọgụ megide ndị Spain. Mgbe ọ laghachiri n’obodo ya, ndị agbata obi ya kpebiri ime ya oriri. Ebe ha hụtakwara na ọ na-ete ụkwụ, ha kpebiri i imitateomi ya mgbe a na-agba egwu. Ihe si na ya pụta bụ na ha dọkpụrụ ụkwụ ha ma mee ka hips ha, ihe abụọ a na-ahụkarị nke meeringue choreography.
Ma o bu eziokwu ma o bu na o bughi eziokwu, obu akuko mara nma. Mana nke bụ eziokwu bụ na agba egwu a abụrụla nke kachasị ewu ewu na ụwa, ruo n'ókè na a kwupụtara ya Ihe omuma ndi mmadu nke mmadu site n'aka UNESCO.
Ikekwe ndị ọzọ ezigbo bụ ọdịnala na-akpata si malite ka ndị nkịtị nke mpaghara nke Ndị Cibao na ha ga-eresị ha obodo ha ngwaahịa. Ha na-ebi n'ụlọ ezumike ma kpọọ otu n'ime ha Perico Ripao. Nke ahụ bụ ebe ha mere onwe ha obi ụtọ site n'ịgba egwu a. N'ihi ya akpọrọ ya n'oge ahụ na mpaghara ahụ Perico Ripao.
Banyere egwu ya, ọ dabere na ngwá ọrụ atọ: na udo, na güira na tambora. N'ikpeazụ, ọ dịkwa ịtụnanya na onye isi kpatara mmụba na mmepe nke meringue bụ onye ọchịchị aka ike. Rafael Leonidas Trujillo, ndị niile nwere mmasị na nke a bụ ndị kere ụlọ akwụkwọ na ìgwè ndị ọrụ iji kwalite ya.
Mambo na mbido Africa
Ndị na-eme Mambo
N'ime egwu ndị a na-ahụkarị na mpaghara Caribbean, nke a ka emepụtara Cuba. Otú ọ dị, a na-ekwu na ọ bụ ndị ohu Africa rutere agwaetiti ahụ sitere na ya. Ka o sina dị, ụdị nke oge a nke agba egwu a bụ n'ihi Arcaño ìgwè ndị egwú na iri atọ nke narị afọ gara aga.
Na-ewere Cuban danzón, gbasiri ya ike ma webata mmekorita na ihe omuma ka o na etinye ihe di iche iche montuno. Otú ọ dị, ọ ga-abụ Mexico Damaso Pérez Prado onye ga-eme ka mambo gbaa gburugburu ụwa. O mere nke a site na ịgbasa ọnụ ọgụgụ ndị na-egwu egwu na ndị otu egwu ma na-agbakwunye ụdị jazz North America dị ka opi, saxophones, na bass abụọ.
E ji mara njirimara dịkwa iche ihe mgbochi nke mere ka aru ghari na iti ya ihe. Ugbua n'ime iri ise nke narị afọ nke iri abụọ, ọtụtụ ndị na-egwu egwu zigara mambo ahụ New York na-eme ka ọ bụrụ ezi mba uwa.
Cha-cha ndị na-agba egwu
A mụrụ n'ime Cuba, kpomkwem ya ga-achọ na a mambo mmetụta. E nwere ndị na-agba egwu na-enweghi nkasi obi na ụda olu nke ịgba egwu nke Pérez Prado na-agbasa. Ya mere, ha na-achọ ihe dị jụụ ma ọ bụ otú ahụ ka esi mụọ ya cha-cha na ụda olu ya na ụda olu ya.
Kpọmkwem, okike ya sitere n'aka onye egwu na onye na-ede egwu a ma ama Enrique Jorrín, nke kwalitekwara ịdị mkpa nke okwu ukwe nke òtù egwú dum ma ọ bụ nke otu onye na-agụ egwú na-akpọ.
Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, egwu a na-ejikọta mgbọrọgwụ nke Cuban danzón na nke ya mambo, ma ọ na-agbanwe ụda olu ya na nke ime ya. Na mgbakwunye, ọ na-ewebata ihe ndị schottische si Madrid. Banyere ịgba egwu n'onwe ya, a na-ekwu na ọ bụ ndị otu mepụtara ya na ụlọ ọrụ Silver Star na Havana. Kwụ ya mere mkpọtụ n’ala nke yiri ọkpụkpọ ụbọchi atọ. Na iji onomatopoeia, ha mere ụdị ihe ahụ ka "Cha Cha Cha".
Cumbia, ihe nketa Africa
N'adịghị ka nke gara aga, a na-ewere cumbia dị ka ihe nketa nke onye african ịgba egwu ndị buuru ndị America bugara dị ka ndị ohu. Agbanyeghị, ọ nwekwara ihe ọmụmụ nke mba na nke Spanish.
Agbanyeghi na taa a na agba egwu ya n’uwa niile ma enwere okwu ndi Argentine, Chile, Mexico na Costa Rican cumbia, a gha achota otutu ndi egwu a na mpaghara Colombia na Panama.
Site na nchịkọta nke anyị na-ekwu maka ya, ndị a sitere na mkpụrụ osisi Africa ha, ebe akụrụngwa ndị ọzọ dịka maracas, pitos na gouache Ha bụ ụmụ amaala na America. Kama nke ahụ, uwe ndị na-agba egwú na-enweta site na ụdị uwe ochie nke Spanish.
Mana ihe kachasị amasị anyị n'isiokwu a, nke bụ ịgba egwu dịka nke a, nwere ezigbo mgbọrọgwụ n'Africa. Ọ na-egosi sensuality na ahụkarị choreography nke agba egwu ndị ka nwere ike ịchọta taa n'ime obi nke Afrika.
O bukwa ezigbo egwu Dominican ma ruo n’uwa niile. Ọ malitere na sixties nke iri abụọ na narị afọ si rhythmic bolero, ọ bụ ezie na ọ na-egosipụtakwa ndị sitere na egwú merengue na ha bụ ndị Cuba.
Na mgbakwunye, maka bachata edochi ụfọdụ ụdị ngwa ọrụ ndị ahụ. Iji maa atụ, a gbanwere maracas nke bolero ihe güira, nke sokwa n’ezinụlọ na-akụ akụ, ewebata ya guitar.
Dika o mere na otutu egwu ndi ozo, achoro bachata na nmalite ya dika igba egwu nke klas di ala. Mgbe ahụ ka amara ya dị ka "Ezigbo egwu", nke na-ezo aka n'omume dị nro nke gosipụtara na isiokwu ha. Ọ dịlarị iri asatọ nke narị afọ nke iri abụọ mgbe ụdị a gbasara n'ụwa niile ruo mgbe UNESCO wepụtara ya Ihe Okike mmadu.
N'aka nke ọzọ, n'akụkọ ihe mere eme ya, bachata abaala ụzọ abụọ. Ihe amaokuta bụ otu n'ime ha. O jikọtara njirimara nke agba egwu a na egwu sitere na ngwa elektrọnik ma jikọtara ya na ụdị ndị ọzọ dịka jazz ma ọ bụ nkume. Onye kacha eme ya bụ Sonia Silvestre.
Nke abụọ subgenre bụ nke a na-akpọ pink bachata, nke nwetaworo nkwado dị ukwuu karịa ụwa nile. O zuola ka anyị gwa gị na ọnụ ọgụgụ ya dị ukwuu bụ Victor Victor na n'elu ihe nile, Juan Luis Guerra ka I wee mara ya. N'okwu a, a na-ejikọta ya na ihunanya ballad.
Banyere ụdị a n'oge a, ihe kachasị mkpa bụ onye na-agụ egwú America nke Dominican Romeo Santos, nke mbu na ndi otu gi, Aventura, na ugbu a naanị.
Egwuregwu ndị ọzọ dị na mpaghara Caribbean na-ewu ewu
Ndị ntụgharị okwu Mapalé
Gba egwu ndị anyị gwara gị ugbu a bụ nke ndị Caribbean, mana ha agafewo ókèala ya wee bụrụ ndị a ma ama n'ụwa niile. Agbanyeghị, enwere agba egwu ndị ọzọ enwebeghị nke ọma na mba ofesi, mana ama ama nke ukwuu na mpaghara Caribbean.
Ọ bụ ikpe nke nkwonkwo, onye mmalite ya dị n'ókèala nke Colombia tupu ọbịbịa ndị Spen. Ọ na - agwakọta mmetụta sitere na paịpụ nke nwere ala na mpaghara Afrika ma nwee akụkụ aghụghọ doro anya. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ agba egwu na-agba egwu nwere egwu na-ada ụda na oge ezumike. Dancegba egwu ya, ha na-ewerekarị ahụkarị colombian ekike. Ọzọkwa bụ ụdị nke agba egwu na fandango, nke enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na aha Spanish ya. Si na Bolivia obodo sugar, gbasaa ngwa ngwa Colombia na-azụ Urabá. Ọ bụ corrido obi ụtọ na nke, n'ụzọ ịtụnanya, ụmụ nwanyị na-ebu kandụl iji jụ ịchụ nwoke.
Ihe doro anya nke Africa mapalé. N’agba egwu a, ọ bụ ndị na-eti mkpu na ndị na-akpọ oku na-etinye ụda. Ebido ya nwere ọrụ, mana taa o nwere ụda emume a na-apụghị ịgbagha agbagha. Ọ bụ egwu siri ike ma dịkwa egwu, juputara na exoticism.
N'ikpeazụ, anyị ga-agwa gị banyere bullerengue. Dika igba egwu ndi ozo di na mpaghara Caribbean, o gunyere igba egwu, egwu na egwu. A na-eme nke ikpeazụ ahụ naanị site na iji mkpọ na aka aka. N'aka nke ya, ụmụ nwanyị na-abụ abụ a mgbe niile ma nwee ike ịgba egwu site na di na nwunye na otu.
Na mmechi, anyị agwala gị ụfọdụ n'ime egwu ndị a ma ama na Caribbean. Ndị izizi anyị kpọrọ aha gị enwetala ama ama na mba ụwa. Maka akụkụ nke ha, ndị a maara nke ọma n'ókèala ebe a na-arụ ha, mana obere na ụwa ndị ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ọtụtụ ndị ọzọ ahụkarị agba egwu nke mpaghara Caribbean. N'etiti ha, anyị ga-ekwu banyere ịgafe farotas, nke scrib, ndị Spain wetara America, ma ọ bụ Aga m abia ama-ama m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Egwuregwu ndị a na-agbakarị na mpaghara Caribbean